TWICE အဖွဲ့ကဆိုရင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့သီချင်းပုံစံလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးဆန်ဆန် နူးညံ့ချိုမြိန်တဲ့ သီချင်းလေးတွေကြောင့် လူကြိုက်များပါတယ်။ သီချင်းပေါင်းများစွာ ထွက်ရှိထားပြီးတဲ့နောက် နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေး “The Feels” ဟာ TWICE အဖွဲ့အတွက် နောက်ထပ်အောင်မြင်မှုတွေ ဆောင်ကြဉ်းလာခဲ့ပါပြီ။
October 11 ရက်နေ့မှာပဲ Billboard ရဲ့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရ TWICE အဖွဲ့ရဲ့ single သီချင်းသစ် “The Feels” ဟာ Billboard Hot 100 chart ထဲကို ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အပတ်စဉ် နာမည်ကြီးသီချင်း အပုဒ် ၁၀၀ စာရင်းမှာ No. 83 နေရာမှာ ရောက်ရှိပါဝင်လာခဲ့တာပါ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ “The Feels” သီချင်းဟာ Hot 100 ထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ TWICE အဖွဲ့ရဲ့ ပထမဆုံးသီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ “The Feels” သီချင်းရဲ့ နောက်ထပ် အောင်မြင်မှုတွေကတော့ ဒီအပတ်ရဲ့ Billboard’s Digital Song Sales စာရင်းမှာ နံပါတ် ၅ အဆင့်ဖြင့် နေရာယူထားတာ‌ကြောင့် TWICE ဟာ Kpop မိန်းကလေးအဖွဲ့တွေအနက် ဒီမှတ်တမ်းကို ရရှိခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက်အဖွဲ့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
Top5စာရင်းဆိုတာက အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ရောင်အားအကောင်းဆုံးသီချင်း (၅) ပုဒ်စာရင်းဖြစ်ပြီး ပထမဆုံးစံချိန်တင်ဖူးတဲ့ မိန်းကလေးအဖွဲ့ကတော့ BLACKPINK အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Billboard’s global charts အနေနဲ့ပြောရရင် “The Feels” ဟာ Global Excl. U.S. chart ရဲ့ အဆင့် (၁၀) နေရာမှာ ရပ်တည်နေတာကြောင့်TWICE အဖွဲ့အတွက် အမြင့်ဆုံးမှတ်တမ်းပါပဲ။
ဒါ့အပြင် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်း “The Feels” ဟာ United Kingdom’s Official Singles chart မှာ ပါဝင်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် TWICE အဖွဲ့အတွက် ပထမဆုံးမှတ်တမ်းဝင်သီချင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ “The Feels” သီချင်းကောင်းလေးနဲ့ ပြည်ပဂီတစာရင်းတွေမှာပါ အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းတွေရေးထိုးနိုင်လာတဲ့ TWICE အဖွဲ့အတွက် ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်။
Next ချစ်သူဖြစ်သူ Ter နဲ့ Project အသစ်အကြောင်း အရိပ်အမြွက်ပေးခဲ့သူလေး Mai Davika »
Previous « တစ်ယောက်တည်းလည်း ဘဝကြီးက စိုပြေသာယာကြောင်း ဂုဏ်ယူစွာပြောခဲ့ဖူးသူ Song Ji Hyo